ကြေးမှုံသတင်းစာမှ အမြန်ကြေး .. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကြေးမှုံသတင်းစာမှ အမြန်ကြေး ..
ကြေးမှုံသတင်းစာမှ အမြန်ကြေး ..
Posted by myohtat on Mar 24, 2012 in Copy/Paste | 12 comments
ကြေးမှုံသတင်းစာတိုက်မှာ (ကြော်ငြာ)ထည့်မယ်ဆိုရင် …
(အမြန်ကြေး)ပေးမှသာ ရက်မကြာခင်မှာပါပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပေးလို့ကတော့
(၁၀)ရက်နေလို့တောင် ပါမှာမဟုတ်ပါဘူး … ကျုပ်ကိုယ်တွေ့ပါ … ကိစ္စတစ်ခုနဲ့(ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း)
(ကြော်ငြာ)သွားထည့်တာ သတင်းစာတိုက်ကို(၂)ခေါက်သွားရတယ် … (၁၃)ရက်ကြာမှ ပါလာတယ် …
အသိတယောက်နဲ့တွေ့မှ (အမြန်ကြေး)ပေးရမှန်းသိတာ … ကျုပ်ကလည်းတော်တော်လေးကို အ ပါတယ် …
လတ်ပေးလတ်ယူတာတွေ အရေးယူနေတယ်ဆိုတော့ မပေးရဲဘူးလေ … ကံကောင်းလို့ပေါ့ (၁၅)ရက်သာကြာရင်
ကျုပ်ပြသနာတက်ပြီ .. အရေးတကြီးကိစ္စရှိလို့ သတင်းစာတိုက်သွားရင် (အမြန်ကြေး)လေးတော့ အပိုဆောင်သွားကြအုံးနော် …
သတင်းစာတိုက်မှာ စာရေးမ(၃)ယောက်ရှိတယ် သူတို့ကို (တိုးတိုးတိတ်တိတ်)ပေးရတာ … ဘယ်သူမှမပြောကြနဲ့နော် ….
ကွန်ပျူတာနဲ့.. စာရင်းသွင်းတဲ့စံနစ်လုပ်ရင်.. ဒါမျိုးဖြစ်ဖို့ခက်မှာပေါ့..
အချိန်နဲ့.. သွင်းရတာမို့.. ကျန်နေရင်.. အသိသာကြီးဖြစ်မှာပေါ့..။
ဂျာနယ်တွေကရော.. အဲလိုငွေရှင်းတန်း..အကောင့်တန့်တွေအတွက်.. ဘာစံနစ်သုံးကြသလည်းဟင်င်င်..
မီဒီယာမှာခွထိုင်ပြီး မီဒီယာကဖေါ်ပေးရမဲ့.. လဘ်စား/ယူအလုပ်ကို… မီဒီယာကိုယ်တိုင်ကလုပ်ပြနေတော့.
ဒီမှာကတော့ ကွန်ပြူတာမသုံးပါ။ လက်နှင့်စာရွက်တွေတပုံကြီးစနစ်ဖြင့်သာ သွားနေတုန်းပါ။ အစိုးရရုံးတခါသွားရင်မိတ်တူဖိုးမနဲပါ။ တခါပေးပြီးလဲပျောက်လို့ လိုလို့နဲ့ပေးလို့ကိုမပြီးတော့ပါ။ တခါတခါကိုယ့်စာရွက်ပျောက်သွားလို့ အစကပြန်လုပ်ရတာတွေတောင်ရှိပါ၏။
ကျုပ်တို့မြန်မာပြည်မှာ ကွန်ပြူတာဆိုတာ အင်တာနက်ဆိုတာ
သတင်စာထဲကြော်ငြာကို ကိုဖားသာ တစ်လက်မဆိုတစ်လက်မ နှစ်လက်မဆိုနှစ်လက်မ
စာရွက်လေးထည့်မယ် ဆိုဒ် ရိုက်ယူသွား သတင်စာကြော်ငြာလက်ခံတဲ့စာရေးမလေးတွေကိုပေး
သူတို့က အဲဒါလေးသိမ်းထားပြီး ရက်ချိန်းပေးလိုက်တယ် သိပ်တော့မသေချာဘူး လေ
ဒါမျိုးဗျ ဘယ်က ကွန်ပြူတာရှိရမှာလဲ
ကြေးမုံကိုမှန်အဖြစ်ပြောင်းဖို့ ဘတ်ဂျက်လိုလို့တဲ့သူကြီးရေ အဲဒါနဲ့စာရင်းသွင်းတဲ့ကိစ္စကကြာနေတာတဲ့ဗျ။
ကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးမှာတော့ ကန့်ကွက်စာ၊ကြော်ငြာစာ အစရှိတဲ့စာစာစာဆိုတာတွေကို သူ့လက်မအလိုက် တွက်ပြီးပေးရတယ်ဗျ နှစ်လက်မပတ်လည်ကိုသုံးသောင်းလောက်ကျတယ် ထည့်ပြီးတစ်ပါတ်အတွင်းမှာပါတယ် ကြေးမုံကော မြန်မာ့အလင်းကောဘယ်မှာထည့်ထည့်ပါ
မပြောဘူးနော်ကိုယ့်ဆရာ ……… လဘ်ပေးရန်မလို (လဘ်မပေးကရန်လိုမည်) ၊
မရလို့ပါ(ပိုက်ဆံ) ရရင်လုပ်ပေးပါတယ် ၊ လူကြီးမင်းတင်ပြလာသောကိစ္စရပ်သည် (ပုဒ်မ၄၊အပိုင်း၎)ကို
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်။ ။ ပုဒ်မ၄ = ပေးမှလုပ် ၊ အပိုင်း၎ = အပေးလိုင်း
တားတားဘာမှပြောဘူးနော် (လည်ပင်းအားဓါးဖြင့်ထောက်ထားသဖြင့် ငိုသံနှော၍တောင်းပန်သံ)
ဟုတ်ပါတယ်။ ၁ သောင်းတန်တကွက်ကို ၂၀၀၀ ပိုပေးရပါတယ်။
နောက်ရှိသေးတယ် ကိုမျိူးထက်ရေ။ ကြော်ငြာထည့်ပြီးရင် သတင်းစာမှာပါလာရင် လက်မလေးတိုင်းကြည့်ဗျ ။ ကိုယ်က တစ်လက်မတစ်ကော်လံ ဘယ်လောက်ဆိုပြီး ပေးခဲ့ပေမယ့် တစ်ကယ်ပါလာတော့ နဲနဲ စီလျှော့နေတတ်တယ်။ တစ်မျက်နှာလုံး ခြုံလိုက်တော့ ကြော်ငြာဌာနက လူတွေ မုန့်ဖို့ပေါ့ဗျာ။
သြော်….. ဒီလူတွေကလည်း ပြန်မပြောပါနဲ့ ဆို တိတ်တိတ်မနေကြဘူး မကျေနပ်ရင် ပြန်ပေးပါ့မယ်…။ ကျောပါနဲ့ရှို…. ဟင့် ဟင့် ဟင့်